ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ (It is my two cents) | MoeMaKa Burmese News & Media
ကာတွန်း OKKW ● နောက်ပြန်မလှည့်ကြေးလေ ...
၂၀၁၂ နဲ့ မိုးမခ၊ ပြီးတော့ … ဦးနုပါလီမန်မှသည် ဒေါ်စုပါလီမန် ဆီသို့
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး - နယ်သာလန် နဲ့ မြန်မာ
ပန်းချီ အောင်ထက် - SOS, Save our Students, Myanmar
ကာတွန်း အောင်မော် ● ကြွက်ချေးတွေ
ကာတွန်း ကိုခေတ် - မီးခွက်စောင့် မီးကို မစောင့်
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ (It is my two cents)
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ (အကယ်ဒမစ်ဂျာနယ်၊ ရန်ကုန်)
(It is my two cents)
ဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၁၄
One Response to ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ (It is my two cents)
K on July 7, 2014 at 12:59 am
I personally think English speakers of Burma have the liberty to substitute “pyas” for “cents” as they please. It is typical for other English speakers to mention their local currency unit (e.g. pence) in this idiomatic phrase.